Bdo render (Walldrobe)ဗီရို
အိမ်သုံးပရိဘောဂပစ္စည်းများကြိုက်နှစ်သက်သော သူများအတွက် တစ်ယောက်သုံး ဗီရိုများဖြင့်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။ အခန်းဖြင့် သီးသန့်နေသောသူများအတွက် နံရံကပ် ဗီရိုများကို အသုံးပြုချင်းအားဖြင့် နေရာမယူဘဲ သီးသန့်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ FACTORYTOHOME CO., LTD သည် ပရိဘောရပစ္စည်းများကို သေသပ်သော ဒီဇိုင်းများဖြင့်လည်းမှာယူနိုင်ပါသည်။
Banquet Chair, Cantenn Table, Cocktail Counter များ
IKON Mart တွင် ဟိုတယ်သုံး၊ ရုံးခန်းသုံးအတွက် DHEENSAY အမှတ်တံဆိပ် Banquet Chair များ၊ Cantenn Table များ၊ Cocktail Counter များကို စုံလင်စွာ ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဆန်းသစ်သော ဒီဇိုင်းများနှင့် လှပသော အရောင်များကြောင့် လူကြီးမင်းတို့၏ Hotel နှင့် ရုံးခန်းများတွင် နေရာယူမည့် ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ IKON Mart မှ လူကြီးမင်းတို့၏ Hotel နှင့် စားသောက်ဆိုင်သုံးပစ္စည်းမျိုးစုံကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Hotel, Restaurant Kitchen တပ်ဆင်ပေးခြင်း ဝန်ဆောင်မှု
အစားအသောက်လုပ်ငန်းတွေအတွက် လိုအပ်သမျှကို တစ်နေရာတည်းနဲ့ ပြီးပြည့်စုံစွာ ဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ထားတဲ့ IKON MART မှ သင့်ရဲ့Hotel၊ Restaurant တွေ အတွက် Central Kitchen များ၊ အိမ်အပြင်အဆင်နဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် Specialized Kitchen များကို လူကြီးမင်းတို့အသုံးပြုမည့် ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်နှင့် ကိုက်ညီသော အရည်အသွေးရရှိစေရန် အကြံပေးခြင်း တပ်ဆင်ပေးခြင်း စသည့် ၀န်ဆောင်မှုများပေးနေပါတယ်။ Kitchen များကို အီတလီနိုင်ငံထုတ် Electrolux Brand ကို အသုံးပြုတပ်ဆင်တာကြောင့် ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးအတွက် အလွန်စိတ်ချရပါတယ်။ အသုံးပြုပုံ၊ သန့် ရှင်းရေးပြုလုပ်ပုံတွေကို အသေးစိတ်ပြသပေးတဲ့ အပြင် after sale service တွေကြောင့်လဲ အသုံးပြုရတာလွယ်ကူစေမှာပါ။
Office Culture ကုမ္ပဏီမှလူကြီးမင်းတို့ အတွက် အရည်သွေးကောင်းမွန်သော လည်သာ၊ သတ္တု နှင့်ချည်ထည်တို့ ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ရုံးသုံး၊ အိမ်သုံး ပရိဘောဂပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ် သည့် သက်သောင့်သက်သာရှိပြီး အပန်းဖြေကုလားထိုင် (Lounge Seating)ကို ထုတ်လုပ် ဖြန့် ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။လူကြီးမင်းတို့ ၏အိမ်၌လည်းအပန်းဖြေထိုင်ခုံအဖြစ် အသုံးပြုရုံသာမက တစ်ဦးတည်းစာဖတ်ရာတွင်လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်သောသက်သော င့်သက်သာရှိသော အပန်းဖြေကုလားထိုင် (Lounge Seating) ကိုဝယ်ယူအသုံးပြုသင့်ပါ သည်။ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် သက်သောင့်သက်သာရှိပြီး အပန်းဖြေအနားယူရာ တွင်အသုံးပြုနိုင်သည့် (Lounge Seating)ကုလားထိုင်ကို ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုပါက (Office Culture) ကုမ္ပဏီကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှာယူ နိုင်ပါသည်။
လှပတင့်တယ်သော ကတ္တီပါ ကော်ဇော် ( Velvet Carpets)
Vanda Living Mall ကုမ္ပဏီမှလူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်၊ရုံးခန်း၊ဟိုတယ်တို့ တွင် အရည်သွေးေ ကာင်းမွန်သော ကတ္တီပါသားဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသည့် ကော်ဇောများကိုလူကြီးမင်းတို့ အတွ က် ဖြန့် ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။ ၄င်းကတ္တီပါ ကော်ဇော (velvet carpets) များသည် လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ် ဟိုတည် များတွင် ကြမ်းခင်းများကို အလှဆင်ရာတွင်လည်း အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။ဒါ့အပြင် လူကြီးမင်းတို့ စိတ်ကြိုက် ဒီဇိုင်းများကို ရွေးချယ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် အရည်သွေးကောင်းမွန်ပြီး ဒီဇိုင်းတင့်တယ်လှပသော ကြမ်းခင်းအလှဆင်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ကတ္တီပါ ကော်ဇော ( velvet carpets) များကို ဝယ်ယူအသုံးပြု အလှဆင်လိုပါက Vanda Living Mall ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
ကြိမ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် သေသပ် ပီး ဒီဇိုင်းဆန်းသော ဧည့်ခန်းသုံး ကြိမ်ထိုင်ခုံ အရှည် ( Landon Chair )
Monsoon Village ( Rattan Furniture ) ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အရည်သွေးမြင့် ကြိမ် ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ဒီဇိုင်းဆန်းပီး သေသပ် လှပသည့် အိမ်ဧည့်ခန်းသုံး ကြိမ်ထိုင်ခုံ အရှည် ( London Chair ) ကို လူကြီးမင်းတို့ အတွက် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချ ပေး လျက်ရှိပါသည်။ လူကြီး မင်းတို့ ၏ အိမ်ဧည့်ခန်းများတွင် ၄င်း ကြိမ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ကြိမ် ထိုင်ခုံအရှည် ( London Chair )ကို အသုံးပြု သင့်ပါသည်။၄င်း ကြိမ်ကုလားထိုင်သည် သေသပ်လှပပီး ကြိမ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထား သည့် အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်လည်း ညီညွတ် သော ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အသုံးဝင် သော အသုံးပြုသင့်သော အိမ်သုံးပရိဘောဂ ပစ္စည်းတစ်မျိုး ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် အိမ်သုံးပရိဘောဂ ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည့် ကြိမ်ဖြင့်ပြု လုပ်ထားသော ဧည့်ခန်းသုံး ကြိမ်ထိုင်ခုံ အရှည်ကို ဝယ်ယူ အသုံးပြု အလှဆင်လိုပါက Monsoon Village ( Rattan Furniture )ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
Modern Style Reception Counter
Delivery and Installation - Door to Door Services - Free Delivery &amp; Installation within Yangon Region - Counter-check again to make sure that fits with Customer’s need and wants. Every product is Competitive Price, High Quality, Quick Delivery, Good Workmanship, especially after-sale service.
ဖုန်းအားသွင်းနိုင်သောပလပ်ပေါက်ပါရှိသည့်ဒီဇိုင်းဆန်သောဆိုဖာထိုင်ခုံ (Sofar Seat)
Office Culture ကုမ္ပဏီမှလူကြီးမင်းတို့ အတွက် အရည်သွေးကောင်းမွန်သောဆိုဖာတို့ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည့် ရုံုးသုံး၊ အိမ်သုံး ပရိဘောဂပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သော လှပပီးဒီဇိုင်းဆန် သည့် ဧည့်ခန်းသုံး ဆိုဖာထိုင်ခုံ (Sofar Seat) ကိုထုတ်လုပ်ဖြန့် ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်နှင့်ရုံးခန်းတို့ တွင် ဧည့်တွေ့ ခုံအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သော ဆိုဖာထိုင်ခုံဖြစ်ပါ သည်။ဆိုဖာထိုင်ခုံ၏ ညာဘက်ခြမ်း ဘေးဘက်တွင် ဖုန်းအားသွင်းနိုင်သည့် လျှပ်စစ်မီး ပလတ်ပေါက်တစ်စုံပါရှိသောကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အတွက်အသုံးဝင်သည့် ဆိုဖာထိုင်ခုံဖြစ် ပါသည်။ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် လှပ ဒီဇိုင်းဆန်ပြီး ဖုန်းအားသွင်းနိုင်သော ဆိုဖာ ထိုင်ခုံ (Sofar Seat)ကို ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုပါက Office Culture ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါသည်။
Office Use 100% Steel Sofa Chair (စတီးထိုင်ခုံ)
လူကြီးမင်းတို့၏ အစည်းအဝေးခန်း နှင့် လုပ်ငန်းခွင်များတွင် အသုံးပြုရန်သင့်တော်သော ဆန်းသစ်သည့် design နှင့် နောက်မှီပါ ထိုင်ခုံများကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းခွင်များတွင် Computer သုံးသူများ၊ အစည်းအဝေးခန်း၊ နားနေခန်း နှင့် ထမင်းစားခန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဆန်းသစ်လှပသော လုပ်ငန်းခွင်လေးတစ်ခုဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့ Smart Mix မှ ဝန်ဆောင်မှုပေးပါရစေ။ ည်။ သေသပ်လှပပြီ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ 100% Steel Sofa ခုံများကိုဆက်သွယ်မှာယူလိုပါက အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ရှိ လုပ်ငန်းရှင်များထံသို့ အဝေးပြေးကားဂိတ်များမှတစ်ဆင့် ပစ္စည်းအရွယ်အစားအလိုက် အရောက်ပို့စနစ်ဖြင့် အထူးကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
12000 ~ 15000 Kyats
လူငယ်တို့အကြိုက် designဆန်လေး 100% Steel Sofa ခုံများ
လူငယ်များအကြိုက်ဖြစ်စေမည့် ဆန်းသစ်သော designများဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏ ဆိုင်များကို ပုံစံတူ ခုံများဖြင့် အလှဆင်လိုက်ပါ။ လူငယ်တို့၏ လွတ်လပ်စွာနေထိုင်မှု ၊ ဆန်းသစ်သောအတွေးများဖြင့် ဖန်တီးလိုက်ပါ။ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ 100% Steel Sofa ခုံများကို အသုံးပြုဖို့ လုပ်ငန်းရှင်များကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။ လှပသော Ice Bar, Coffee Bar လေးတစ်ခုဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့ Smart Mix မှ ဝန်ဆောင်မှုပေးပရစေ။ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ရှိ လုပ်ငန်းရှင်များထံသို့ အဝေးပြေးကားဂိတ်များမှတစ်ဆင့် ပစ္စည်းအရွယ်အစားအလိုက် အရောက်ပို့စနစ်ဖြင့် အထူးကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
လှပ သေသပ်ပီး ဒီဇိုင်းဆန်သော ဆိုဖာ ထိုင်ခုံ ( Sofar Setee )
Than Lwin Homemart ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အိမ်သုံးပရိဘောဂ ပစ္စည်း တစ်မျိုးဖြစ်သည့် ဧည့်ခန်းသုံး ဆိုဖာ ထိုင်ခုံ ( Sofar Setee ) များကို လူကြီးမင်းတို့ အ တွက် ဖြန့် ဖြူးရောင်းချ လျက်ရှိပါသည်။၄င်း ဆိုဖာထိုင်ခုံ များကို လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်ဧည့် များတွင် ဧည့်တွေ့ ခုံများအဖြစ်လည်းကောင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒါ့ပြင် ဆိုဖာထိုင်ခုံများ သည် သေသပ်လှပသည့် အပြင် အရည်သွေးကောင်းမွန်သော ကြာရှည်အသုံးခံပါသည်။ ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ၄င်း ဧည့်ခန်းသုံး ဆိုဖာထိုင်ခုံ ( Sofar Setee ) များကို ဝယ်ယူအသုံးပြုအလှ ဆင်လိုပါက Than Lwin Homemart ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက် ဆက် သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
အိမ်အလှဆင်လိုသူများအတွက် 100% Steel Sofa ခုံများ
Smart Mix မှ လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျ ရွေးချယ်နိုင်အောင် အရောင်အသွေးစုံလင်စွာ ဆန်းသစ်လှပသော 100% Steel Sofa ခုံများကို လူကြီးမင်းတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် ခေတ်နဲ့အညီ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မိမိတို့၏ အိမ်တွင် သုံးရလွယ်ကူသော Steel Sofa ခုံများကို နားနေခန်း၊ စာကြည်ခန်း၊ computerခန်း နှင့် ထမင်းစားပွဲများတွင်သုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဆန်းသစ်လှပသော ခုံများကို လူကြီးမင်းတို့ စိတ်ကြိုက်မှာယူနိုင်ပါသည်။ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ရှိ လုပ်ငန်းရှင်များထံသို့ အဝေးပြေးကားဂိတ်များမှတစ်ဆင့် ပစ္စည်းအရွယ်အစားလိုက် အရောက်ပို့စနစ်ဖြင့် အထူးကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
New Design High Quality Cheap Kitchen Cabinet- ဈေးသက်သာပြီးအရည်အသွေးကောင်းမွန်သော မီးဖိုချောင်